Amitabh Bachchan oo dib ugu soo laabtay ciyaarista kubada cagta
Aktarka Amitabh Bachchan ayaa dib u soo xusuustay xiligii dhalinyaranimadiisii waxaana uu bilaaway inuu ciyaaro kubada cagta. Jilaagan ayaa lagu arkauy isagoo caruur badan kubad kula ciyaarayo kubad Mohammedan Sporting ground,halkaas uu ku duubayo … Read More »
Aktarada Parineeti Chopra oo hooyadeed ku soo dhaweysay Twitterka
Adduunka waxaa si aad ah ugu sii kordhaya isticmaalka barta Twitterka. Aktarada Bollywoodka ayaa ku soo baraarugay mardambe iney isticmaalaan bartan. Hadaba hooyada Aktarada Parineeti Chopra’ ee Reena ayaa haatan ku soo biirtay isticmaalka … Read More »
Priyanka Chopra oo Filim la soo wada Jilaaga Hollywoodka ee Dwayne Johnson
Priyanka Chopra ayaa magacweyn ku yeelaneysa xili dhow Filimada Hollywoodka Mareynkanka kadib Bollywoodka India oo caan ay ka noqotay. Wararka waxaa ay sheegayaan Priyanka Chopra iney haatan Filim Hollywoodka ah ay la keeneyso jilaaga … Read More »
Akshay Kumar Iyo Nargis Fakhri Oo Hal Hees Ka Wada Qaadi Doonaan Filimka Azhar
Waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyay in Super Star Akshay Kumar iyo atirishada quruxda badan Nargis Fakhri ay hal hees ka wada qaadi doonaan filimka weyn Azhar. Filimka Azhar oo uu hogaamiye ka yahay … Read More »
Inaba Caadi Ma Ahan Goos Goos Cusub Oo Laga Soo Bandhigay Filimka Airlift (+Video)
Akshay Kumar waa jilaa door walbo sameyn karo haatana wuxuu dadka kaga yaabsaday goos gooska laga soo bandhigay filimkiisa la wada sugaayo Airlift. Khiladi Kumar ayaa badalay qof walbo dareenkiisa madaama lagu soo bandhigay … Read More »
Bipasha Basu oo ku dhawaaqeysa Aktarka xiriirka kala dhaxeeya ee Bollywoodka
Aktarada , Bipasha Basu ayaa ku dhawaaqeysa bishan gudaheeda Amooraheeda. Aktaradan ayaa saaxib la soo noqotay Aktaro badan oo Bollywoodka,waxaana ay haatan la socotaa Aktarka ay la keentay Filimkeedii ugu dambeeyay ee Alone kaas … Read More »
Aagadu (English: He will not halt) is a 2014 Indian Telugu action comedy film directed by Srinu Vaitla. Written by Anil Ravipudi, Upendra Madhav and Praveen Varma, the film was jointly produced by Ram … Read More »
Filimka Shah Rukh Khan ee Dilwale oo ku biiray 10-ka Filim ee 10 maalmood rikoor ku sameeyay
Shah Rukh Khan Filimkiisa soo baxay 18-kii December 2015 ee Dilwale ayaa ku biiray Liiska 10-ka Filim ugu fiicnaa ee lacagaha badan ka soo xareeyay dalalka dibada ka ah India ee Adduunka. Marka India … Read More »
M-A-D-E I-N AMERICA M-A-D-E I-N AMERICA Christina: Striped flag wrapped around my head Blue, white, little bit of red Live free like we always said Oh woah oh California born and raised Work hard, … Read More »
Kuch Khatti Kuch Meethi afsomali
Here is another Indian that also closely resembles another Hollywood movie. This story revolves around the lives of two look-alike sisters, who are brought up separately by their estranged parents, who had separated due … Read More »
4	Kick 2 Afsomali